COVId-19 က တွန်းပို့နေသည့် နည်းပညာအသုံးချရေး - Latest News
မိတ္ထီလာမြို့နယ်အတွင်း ယာဉ်သွားလာခွင့်ပိတ်၊ မြို့ဝင်ဂိတ်ငါးခုတွင် စစ်ဆေးမည်
ျပည္ပတင္ပို့သည့်ပမာဏ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို နိုင်ငံတော်အရန်ဆန်အျဖစ်ရောင်းခ်ပေးရမည်
သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်ပြေးဆွဲမည့် YBS ယာဉ်များ CNG အခမဲ့ဖြည့်နိုင်မည်
COVId-19 က တွန်းပို့နေသည့် နည်းပညာအသုံးချရေး
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (W.H.O) က COVID-19 ကို ကမ္ဘာ့ကူးစက်မြန် ကပ်ရောဂါ (Pandemic) အဖြစ် ကြေညာအပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း လှုပ်လှုပ်ခပ်ခပ် ဖြစ်သွားသည်။ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ အပါအဝင်အရေးပေါ် အစည်းအဝေးကို ချက်ချင်းခေါ်ယူကာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများအလိုက် အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်များ ချမှတ်ခဲ့သည်။ ယင်း၏ နောက်ဆက်တွဲရလဒ်အဖြစ် နာမည်ကြီးဘုရားဈေးပွဲတော်များ တဖြည်းဖြည်းချင်း ပိတ်သိမ်းလာသည်။ ကျောင်းများ၊ သင်တန်းများ ဆက်တိုက်ပိတ်လာသည်။ ထို့နောက် ကာရာအိုအေများ၊ ဘားများ Night Club များပိတ်ရန် ညွှန်ကြားလာသည်။ မတင်မကျ ဖြစ်နေသည်မှာ တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲများဖြစ်သည်။ ယခုမူ ဖြေလိုသူများနှင့် မဖြေလိုသူများ အဆင်ပြေနိုင်မည့် နည်းလမ်းတစ်ခုရသွားသည်ဟု သိရသည်။
ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဝူဟန်မြို့ကစလိုက်သည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများအပြားသို့ ကူးစက်ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ တောင်ကိုရီးယား၊ အီရန်၊ အီတလီ၊ မလေးရှား စသည့် နိုင်ငံများ၏ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ကူးစက်မှုများကြားရ၏။ ဆက်လက်၍ နိုင်ငံများစွာကူးစက်ခံနေရသော်လည်း စတင်ဖြစ်ပွားရာ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကူးစက်ခံရနှုန်း ကျဆင်းသွားသည်။ ဝူဟန်မြို့ကပင် ဆေးဝန်ထမ်းများပြန်လာကြပြီဖြစ်သည်။ အခြားနိုင်ငံများတွင် အသည်းအသန်ဖြစ်နေဆဲ။
COVID-19 ကြောင့် နိုင်ငံအများအပြား အထိနာကြသည်။ ပထမဦးစွာ ကျောင်းများ၊ ကောလိပ်များ၊ တက္ကသိုလ်များ ပိတ်လိုက်ရသည်။ ထို့နောက် လူဝင်လူထွက်ကန့်သတ်ရာမှ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ ကူးသန်းသွားလာမှုများ ရပ်တန့်ကုန်သည်။ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျဆင်းသွားသည်။ ဆက်၍ ဒေါ်လာဈေး၊ ရွှေဈေး၊ ရေနံဈေးများကြလာသည်။ စက်ရုံများပိတ်၍ အလုပ်အကိုင်လက်မဲ့များ တစ်မုဟုတ်ချင်း မြင့်တက်လာသည်။
ဝူဟန်ကြောင့် ကျောင်းများပိတ်လိုက်ရသော်လည်း နည်းပညာကို ကောင်းစွာအသုံးချနိုင်သည့် နိုင်ငံများတွင် အချိန်မီကုစားနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် Online မှ သင်ကြားနိုင်ရန် စီစဉ်ကြသည်။ ကလေးတစ်စု မော်နီတာတစ်ခုရှေ့တွင် ထိုင်လိုက်ရုံဖြင့် သင်ကြားမှုမပျက်စေရန် ဆောင်ရွက်လာကြသည်။ ထို့အတူ e-Governance တွင်ကျယ်သောနိုင်ငံများတွင်လည်း ရုံးသွားစရာမလိုဘဲ မိမိတို့အိမ်မှနေ၍ ရုံးတက်နိုင်ကြလေသည်။ ကုမ္ပဏီအချို့ပင် Work from Home အစီအစဉ် စတင်လာကြသည်။ အချို့နိုင်ငံများဆိုလျှင် Online ဖြင့် ချိတ်ဆက်သင်ယူမှု ပုံစံမျိုး ကျင့်သားပင်ရနေကြလေပြီ။ ယနေ့ကမ္ဘာတွင် အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် Education 4.0 ဆိုသည့် ပညာရေးစနစ်ဖြင့် အံဝင်ခွင်ကျပင်ဖြစ်နေသည်။
ဤနေရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ နည်းပညာပြင်ဆင်ထားမှုကို အနည်းငယ်မျှဝေပေးလိုသည်။တရုတ်နိုင်ငံသည် အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် သန်းပေါင်း ၁၈၀ သော မူလတန်းကျောင်းသားများကို ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် အပူတပြင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းအစီအစဉ်မှာ Cloud Learning Platform ဖြစ်သည်။အင်တာနက်ဖြန့်ကြက်နိုင်သည့် နေရာတိုင်းတွင် သင်ယူနိုင်ရန် အမျိုးသားပညာရေးတာဝန်တစ်ရပ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော် ရုပ်သံလွှင့်ဌာနက ဦးဆောင်၍ ကလေးများအတွက် သင်ခန်းစာပို့ချချက်များကို ရုပ်သံလိုင်းများစွာက ထုတ်လွှင့်ပေးနေ၍ အိမ်မှထိုင်ကာ သင်ယူနေကြလေပြီ။ အရေးပေါ်အနေအထားမျိုးတွင် ထုတ်လွှင့်နိုင်ရန်လည်း စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ အစီအစဉ် ပထမပတ်အတွင်းမှာပင် ဘာသာရပ်ပေါင်း ၁၂ ဘာသာသင်ခန်းစာပေါင်း ၁၆၉ ခုပင်ရှိခဲ့လေပြီ။ တရုတ်နိင်ငံ ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာကြီး ၃ ခုဖြစ်သည့် China Mobile, China Unicon, China Telecom တို့ပါသည်။ ထို့အတူ ICT နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီးများဖြစ်သည့် Huawei, Baidu, Alibaba တို့ကလည်း ထောက်ပံ့ပေးကြသည်။ ဒေတာအချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းထုတ်လွှင့်နိုင်ရန် Server ပေါင်း ၇၀ဝ၀ ခန့်ကိုအထောက်အပံ့ ပေးထားသည့်အပြင် Bandwidth မှာလည်း 90 Terabytes ခန့်အထိ ရှိနိုင်ရန် အကူအညီပေး ထားကြလေသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျောင်းသားသန်း ၅၀ ကျော် တစ်ပြိုင်နက် အသုံးပြုနိုင်သကဲ့သို့ ကျောင်းသင်ခန်းစာများထုတ်လွှင့်ရန် ဆရာ၊ ဆရာမပေါင်း ၆ သိန်းကျော်ကို Alibaba နှင့်ချိတ်ဆက်ကာ အွန်လိုင်းသင်ကြားရေးကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် လျက်ရှိကြောင်းသိရလေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျောင်းများပိတ်ဟုဆိုလိုက်သည်နှင့် အိမ်သို့ပြန်ကာငုတ်တုတ်မေ့နေရမည့် အဆင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ပညာရေးဘတ်ဂျက်များ မည်သို့ပင် တိုးတက်လာစေကာမူ နည်းပညာပိုင်းကို တိုးမြှင့်ရန် မစဉ်းစားကြ။ သံသေတ္တာဖြင့် မေးခွန်းများသယ်ဆဲ။မေးခွန်းတိုက်များ ဆောက်ဆဲ။ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ ရှိ၍ ပိတ်ရလျှင် ဒက်ဒက်ထိပိတ်လိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပိုင် Educational Channel လေးတစ်ခုမျှပင် မရှိ။ ယခုကဲ့သို့ အချိန်မျိုးတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေသည်။ 2020-2021 ပညာသင်နှစ်အတွက် သင်ရိုးများပြောင်းထားလေပြီ။Grade-4-7-10။ အကယ်၍ Covid-19 က အခြေအနေအရ မပြောနိုင်သေး။ အချိန်တန်၍မှ သင်တန်းပို့ချမှုများနှောင့်နှေးခဲ့လျှင်။ ဤအချိန်တွင် e-channel တစ်ခုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှိခဲ့လျှင် ယင်း Channel မှ အချိန်အလိုက် ဘာသာရပ်ပို့ချချက်များကို ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပါမောက္ခများကိုယ်တိုင် ပို့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းတစ်ခုကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်များ သက်သာနိုင်သည်။ နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှ ဘာသာရပ် ဆရာ၊ ဆရာမတိုင်း အတိုင်းအဆမရှိ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ကလေးများအတွက် ပို့ချချက်များ နေနေသာသာ ကိုယ်ပိုင်ချန်နယ်တစ်ခုမရှိ၍ အခက်တွေ့နေရ၏။ အခြား Channel တစ်ခုနှင့် အချိန်မီအခါမီ ချိတ် ဆက်သင့်လှသည်။
ဆိုရလျှင် အစိုးရကျောင်းကလေးများသာ အခက်တွေ့လျှင် တွေ့နိုင်ပါသည်။ ပြည်တွင်းရှိ International Schools ကျောင်းများကမူ ကျောင်းပိတ်၍ ငုတ်တုတ်ထိုင်မနေကြ။ နည်းပညာကို အကျိုးရှိရှိသုံးရန် စီစဉ်နေကြလေပြီ။ ရန်ကုန်တွင် Yangon International School, Royal British International School, The British School, Yangon American School, Thanlun International School နှင့် ILBC ကျောင်းများလည်း ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ယာယီပိတ်ပါသည်။ International Schools များ၏ စာသင်ကာလမှာ သြဂုတ်လမှ ဇွန်လအထိ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးများ မနစ်နာစေရန် Online Learning လုပ်ကြပါသည်။ ကလေးများလက်ထဲတွင် ipad, laptop များပေးကာ နေ့စဉ် နံနက် ၈ နာရီမှ ၃ နာရီအထိ Online ကတစ်ဆင့် Face to Face သင်ကြားနေကြကြောင်း သိရလေသည်။
ဤအချိန်မျိုးတွင် နိုင်ငံအတွင်းရှိကလေးများအခြေအနေမှာ ကျောင်းပိတ်ထား၍သာ တော်သေးသည်။ ဖွင့်ချိန်ဆိုလျှင်လည်း အိမ်များတွင် ငုတ်တုတ် ထိုင်နေကြရုံသာ။ မိဘများကလည်း အတန်းကြီးလာသည်နှင့် ဖုန်းကိုင်ခွင့် မပေးတော့ချေ။ ipad, Laptop ကိုင်ခွင့်ကားပို၍ပင်ဝေးတော့သည်။ နည်းပညာ၏ အသုံးချတန်ဖိုးကို နားမလည်နိုင်ကြသေးသည်မှာ ဝမ်းနည်းဖွယ်ပင်ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ နည်းပညာခေတ်ကြီးထဲတွင် နည်းပညာကို ထိရောက်စွာအသုံးမချနိုင်သေး၍ ခေတ်နောက်ကျမြဲဖြစ်သည်။ နည်းပညာ အဟန့်အတားကြောင့် လူချင်းတူသော်လည်း အခွင့်အရေးခြင်း တန်းတူညီမျှ မရနိုင်သေးပါ။ မြန်မာ့ပညာရေးတွင် မေးခွန်းကိစ္စ၊ စာမေးပွဲကိစ္စ၊ ဝင်ခွင့်ကိစ္စမျှလောက်ဖြင့် တိုင်ပတ်မနေသင့်တော့ပါ။ အချိန်မီ အခါမီ နည်းပညာကို အသုံးချနိုင်စွမ်းမရှိနိုင်လျှင် အရှိန်အဟုန်မြန်စွာဖြင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသော ကမ္ဘာကြီးထဲတွင် မည်မျှနောက်ကျ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်ကို ကြိုတင်မြော်မြင် စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်မှ တန်ကာကျပါလိမ့်မည်။
Ref: Tin Nyunt online Page.
မှတ်ချက် ။ ။ ဤဆောင်းပါးရေးပြီးသည့် 21. 3.2020 နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်(MTF)က သင်ရိုးသစ်သင်တန်းများ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားသော်လည်း Online ပို့ချချက်များ ဖြင့် အစားထိုးလေ့လာနိုင်ရေးအတွက် စောလျင်စွာ စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါသည်။
Mask တစ်ခုစမ်းချုပ်ကြည့်နေဟု အတိုင်ပင်ခံဆို
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာနှင့်ဇနီးကို မြဝတီတွင် ဖမ်းမိ
စာမေးပွဲအောင်ဖို့ထက် တတ်မြောက်ကျွမ်းကျင်ဖို့ စဉ်းစားပါ